Umaka: umaki | Martech Zone
Ukuqonda Ukubaluleka Kwemihlahlandlela Yekhwalithi Yokusungula (IQG)
NgoLwesithathu, July 6, 2016 UTed Dhanik
Ukuthenga imidiya online akufani nokuthenga umatilasi. Umthengi angabona umatilasi kwesinye isitolo afuna ukusithenga, angaqapheli ukuthi kwesinye isitolo, ucezu olufanayo luyintengo ephansi ngoba lungaphansi kwegama elihlukile. Lesi simo senza kube nzima kakhulu kumthengi ukwazi kahle ukuthi batholani; okufanayo kuya ekukhangiseni okuku-inthanethi, lapho amayunithi athengwa athengiswe futhi afakwe kabusha
I-Digital Advertising kungenzeka ukuthi ibe yinkcitho ephezulu yokukhangisa kwabezindaba ngo-2016 ngokwe-comScore. Lokho futhi kukwenza kube ilitshe elingenakuphikiswa lokukhwabanisa ngokuchofoza. Eqinisweni, ngokusho kombiko omusha wokukhwabanisa embonini yezokukhangisa online, ingxenye eyodwa kwezintathu yazo zonke izindleko zokukhangisa izomoshwa ngokukhwabanisa. Ama-Distil Networks kanye ne-Interactive Advertising Bureau (IAB) bakhiphe Umhlahlandlela Womshicileli Wedijithali Wokulinganisa Nokunciphisa Imotra Traffic, umbiko ohlola okwanamuhla
NgoLwesibili, Septhemba 24, 2013 NgoLwesibili, Septhemba 24, 2013 Douglas Karr
Izinhlelo zokusebenza ze-AddShoppers zikusiza ukukhulisa imali engenayo yomphakathi, engeza izinkinobho zokwabelana futhi zikunikeze ama-analytics wokuthi ezenhlalo ziyithinta kanjani intengiso. I-AddShoppers isiza abahlinzeki be-ecommerce basebenzise imithombo yezokuxhumana ukwenza ukuthengisa okuningi. Izinkinobho zabo zokwabelana, imivuzo yomphakathi, nezinhlelo zokusebenza zokwabelana ngokuthenga zikusiza ukuthi uthole amasheya omphakathi amaningi angaguquka abe ukuthengisa komphakathi. I-AddShoppers analytics ikusiza ukulandelela ukubuya kwakho ekutshalweni kwemali futhi uqonde ukuthi iziphi iziteshi zenhlalo eziguqukayo. I-AddShoppers yandisa ukubandakanyeka kwamakhasimende ngokuhlanganisa
NgoLwesibili, Okthoba 2, 2012 NgeSonto, Septhemba 8, 2013 Douglas Karr
Uma wake wasebenza kusayithi leklayenti futhi kwadingeka ungeze ikhodi yokuguqula isuka ku-Adwords ibe isifanekiso kepha kuphela lapho leyo thempulethi iboniswa ngezinqubo ezithile, uyazi izinhlungu zamakhasi wokumaka! Amathegi angamabhithi amancane ekhodi yewebhusayithi angasiza ukuhlinzeka ngemininingwane ewusizo, kepha futhi angadala nezinselelo. Omaki abaningi kakhulu bangenza amasayithi ahambe kancane futhi abe mbumbulu; amathegi asetshenziswe ngokungafanele angahlanekezela ukulinganisa kwakho; futhi kungaba njalo
U-Wordle ushaye i-blogosphere emasontweni ambalwa edlule kanti ama-blogger abelokhu ebhuza! I-Wordle uhlelo lokusebenza lwe-Java oluguqula ifu lakho lethegi libe yinto enhle. Bengicabanga ukuthi uL Wordle upholile, kepha hhayi ukuthi une-blog. Namuhla ngibonisene nabakwaSharpminds. Omunye wabantu abakulesi sikhathi, uLinda Watts, unikeze ikhadi lakhe futhi ngaso leso sikhathi langamomotheka ebusweni bami! ULinda wayeneqoqo lonke lazo (kanye nezinye